ရည်ရွယ်ချက်၊ ဦးတည်ချက်၊ တန်ဖိုးထားရှိမှုများ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လတ်ဆတ်သောအစားအစာ လက်ကားအရောင်းဈေးကွက်နှင့် ထောက်ပံ့ ရေးကွန်ယက်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်နံပါတ်(၁)နေရာတွင်ရှိနေပြီး ယင်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍမျိုးတွင်ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်ကာ တီထွင်မှု၊ အဆင်ပြေ လွယ်ကူမှု၊ အရည်အသွေးတို့တွင်အကောင်း ဆုံးဖြစ်စေရန်။
မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်သီးဝလံပန်းမန်ဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးခြင်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့် တောင်သူလယ်သမား များ၊ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများ၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ကိုလည်းလျော့ချရန်။
သစ်သီးဝလံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပန်းမန်များနှင့် အခြားတန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ထားသော အစားအစာ ထုတ်ကုန်များစသည့်လတ်ဆတ်သောထုတ်ကုန်များကို ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ဈေးကွက်တင်ခြင်း ဗဟိုချက်အဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လွယ်ကူချောမောစေရေး အတွက်ခေတ်အမီဆုံးနှင့်အဆင့်အမြင့်ဆုံး အခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခုအဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များ (ဈေးကွက်အသုံးပြုသူများ) ၏ လိုအပ်ချက်များက အရေးပါမှုနှင့် ဖောက်သည် များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးွားရေးလုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ရေးရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တို့သည် အရေးပါကြောင်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်။
ဈေးကွက်အသုံးပြုသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အလားအလာ ကောင်းပြီး ကြီးထွားလာစေရန်ပံ့ပိုးနိုင်ရေးအတွက်ထိုသူများနှင့် အတူဆွေး‌‌နွေးညှိနှိုင်း၍ (MAEX = Myanmar Agro Exchange Public Limited) ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်။
လုံခြုံစိတ်ချရ၍ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အလုပ်ဌာနနေရာတစ်ခု ဖြစ်စေပြီး နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်း အတိုင်း ရှိစေရန်။
ဝန်ထမ်းနှင့်စီမံအုပ်ချုပ်သူများအကြားတွင် စည်းလုံးမှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဖန်တီးပေးရန်နှင့် ပွင့် လင်း၊ ရိုးသားစွာ ဆက်သွယ်၍ မပြောင်းလဲသော အရည်အသွေးပြည့်ဝ သည့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်။
ကျွနိုတို့၏ဝန်ထမ်းများကို လေးလေးစားစားနှင့်ဂုဏ်သရေရှိရှိဆက်ဆံရန် နှင့် တန်းတူရည်တူရှိမှုနှင့် ကွဲပြားမှုတို့၏ အခြေခံသဘောတရားများကိုတန်ဖိုးထားရန်။
အလုပ်သမားများ၏တီထွင်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ တန်ဖိုးများ တက်လာ စေရန်။
ကျွန်ုတို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ထိထိရောက်ရောက်နှင့် စနစ်တကျဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏တန်ဖိုးထားမှုများကို မြှင့်တင်ရန်။
မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာမြန်မာအက်ဂရိုအိတ်ချိန်းအများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည် (သို့) ထိခိုက်နိုင်သည့်မည်သည့်အုပ်စုသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုဆိုလိုပါသည်။
ဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာမြန်မာအက်ဂရိုအိတ်ချိန်းအများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည် (သို့) ထိခိုက်နိုင်သည့်မည်သည့်အုပ်စုသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုဆိုလိုပါသည်။
မတူညီသောမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏အကျိုးစီးပွားသည်မြန်မာအက်ဂရိုအိတ်ချိန်းအများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် အတွက် တရားဝင်ဖြစ်မှုနှင့် ပင်ကိုယ်တန်ဖိုးတစ်ခု” ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အောက်ပါအရေးကြီးသော နေရာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည်လူဦးရေစုစုပေါင်း၏၇၀ရာခိုင်နှုန်းကိုပံ့ပိုးပေးသောဈေးကွက်သတင်းအချက် အလက်များကို တိကျမှန်ကန်စွာထုတ်ယူခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ကုန်ထုတ်သူများနှင့် လယ်သမားများ၏အကျိုး စီးပွားကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးပါမည်။
ကျွနိုပ်တို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၏ရလဒ်သည်စားသုံးသူကို သင့်တော်သောဈေးနှုန်းဖြင့် အန္တရာယ် ကင်းသော လတ်ဆတ်သောထုတ်ကုန်များသို့ရောက်ရှိနိုင်အောင်ကူညီပေးပါမည်
စားသုံးသူစားသုံးသူများ၏ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သောမည်သည့်ဓာတုကျန်ကြွင်းမပါဘဲ ကျန်းမာ လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, သစ်သီးဝလံများ ရနိုင်ပါမည်။
ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ဝယ်သူများ၏ ဝင်ငွေနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကိုထိရောက်စွာအကျိုးရှိစေရန် ထုတ်လုပ်မှု၏အမှိုက်နှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချရန်က ျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်သောလက်လီ / လက်ကားဖြန့်ဖြူးခြင်းစနစ်ရှိရန်ဈေးကွက် ဝယ်လိုအား နှင့် ရောင်းလိုအားကိုထိန်းချုပ်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရလဒ်အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ၏ပို့ကုန်ပမာဏနှင့် တန်ဖိုးများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ဂျီဒီပီတိုးတက်လာစေမည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဌာနများ / ကဏ္ဍများအားလုံးသည် က ျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအား အသိပေးခြင်းအကြံ ပေးခြင်း၊ ပါဝင်ခြင်း၊ပူးပေါင်းခြင်းနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သင့်လျော်သော သက်ဆိုင်သူများ တန်ဖိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မှုများ ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်တာဝန်နှင့်တာဝန်များရှိသည်။
To be the number one fresh food wholesale market and supply chain company in Myanmar for its industry leadership and commitment to innovation, convenience, quality and excellence.
To develop Myanmar Agriculture and Horticulture industry as well as to alleviate poverty of farmers, growers and sellers.
To provideastate of the art infrastructure and services to facilitate the development and operation of the world class distribution and marketing hub for fresh produce such as fruits, vegetables and flowers and other value added food products.
To recognize the importance of our customers (market users) needs and common goals to the success of our business.
To work in consultation with market users to manage MAEX assets, to meet their needs and to support their business viability and growth.
EMPLOYEE AS COMPANY’S ASSET
To provideasafe and healthy workplace and comply to international standard.
To createacohesive collaboration amongst the employees and management communicate openly, honestly and provideaconsistent quality of service.
To treat our employees with respect and dignity, value the principles of equality and diversity.
To treat our employees with respect and dignity, value the principles of equality and diversity
To conduct our business efficiently and orderly to maximize our shareholders’ values.
Our Stakeholder Value Creation Strategy will reflect the important component which interplays social, cultural, and political consideration to our business activities and investment.
A stakeholder is “any group or individual who can affect or is affected by MAEX’s business activities”,
We hold that interests of different stakeholder group are legitimate and of “intrinsic value” or our MAEX.
In our stakeholder value creation strategy, we are going to consider the following key components areas
We will improve the interest of actual producers/farmers by letting them to access precise market information, whose population contributes 70% of total population.
The result of our operation will enable the consumer to reach harm free fresh products with reasonable price.
The consumer can be able to have healthy fresh vegetables, fruits without any chemical residue that can harm to consumers’ health.
We will try to minimize the waste of production so that it will efficiently benefit the income and expense of the producers and buyers.
We will control the market demand and supply to have correct retail/wholesale distribution system.
We will enhance employment opportunity in agriculture sectorThe result our operation will increase the GDP of agriculture sector by increasing export quantity and values of agriculture products.